Inta uu noolaan karo qof oo ahaan karta ilaa 115
Nolosheena ayaa ku ekaan karta ilaa 115 oo sano sida ay sheegeen saynisyahanada Maraykanka.
Muuqaal Daawo: Safiyo Jaamac Gayre oo dhawaan ka qalan jabisay jaamacadda PSU
Safiyo Jaamac Gayre waxay ka mid ahayd dufcadii u dambeysay ee ka qalin jabiyay kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda Puntland PSU, ee magaalada Garowe.
Daawo: Safiyo Jaamac Gayre oo dhawaan ka qalan jabisay jaamacadda PSU
Tirada ardayda dhiganaysa caafimaadka ayaa la kordhin doonaa 25% sanadka 2018, iyadoo wasiirada ay shaaca ka qaadeen qorshe caafimaad ee tababarka dhaqaatiirta England.
Maqal Gudiga hirgalinta doorshooyinka oo ka hadlay qabashada lacagta musharaxiinta
Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal ayaa soo bandhigay koonto bangi oo loola dan leeyahay qabashada lacagaha is-diiwaan galinta musharaxiinta.
Gudiga hirgalinta doorshooyinka oo ka hadlay qabashada lacagta musharaxiinta
Amnesty International ayaa ku eedeysay in waddamada qaniga aysan masuuliyad iska saarin qaxootiga, iyadoo sheegtay inay qaataan qaxootiga ugu yar ayna u qabtaan wax yar.
Maqal Buug uu qoray nin tahriibka dhibkiisa arkay oo ku noqday Hargaysa
Maxamed Xuseen Geeldoon, waa wiil dhalinyaro ah oo isagoo tahriib ah saxaraha ka gudbay oo gaaray Libya, doon ayaa la qalibmi gaartay, wuu silcay, wuu rafaaday ka dibna wuxuu go'aansaday inuu dalkiisii dib ugu noqdo oo wuxuu ku laabtay magaalada Hargaysa oo uu haatan ku suganyahay.
Buug uu qoray nin tahriibka dhibkiisa arkay oo ku noqday Hargaysa
Google ayaa balaarinayso mashruuc ay ugu samaynayso wi-fi internet lacag la'aan ah Hindiya si ay u hesho bilyan macaamiil mustaqbalka ee isticmaala adeegeeda.
Waxaa magaalada Liverpool ka socda shirweynaha xisbiga Shaqaalaha iyadoo maalintii Sabtidii dib gudoomiye loogu doortay Jeremy Corbyn.
Shirwaynaha xisbiga Shaqaalaha ee UK oo ka socda Liverpool
Dadka u ololeeya dumarka ayaa gudbiyay codsi ay saxiixeen in kabadan 14,000 oo dumar Sacuudi ah oo ku baaqaya in la joojiyo sharciga dumarka ay u baahan yihiin inuu nin wakiisho.
Xul Teknoolajiyada iyo dhismaha : Wax dhisida oo aad u noqonaysa digital